VaKasukuwere Vobvisa kuDare Nyaya yeKudzinga Meya weGweru neMakanzura Basa
Dare repamusorosoro reSupreme Court nemusi weMuvhuro rakatambira kubvisa kwakaitwa nemagweta egukurukota rezvekutongwa kwematunhu VaSavior Kasukuwere kwekupikisa mutongo waive wapiwa nedare reHigh Court wekuti kudzinga kwavakaita makanzura eguta reGweru kwaive kusiri pamutemo.
Izvi zvinoreva kuti makanzura aya ave kudzoka pabasa. Vatongi vedare repamusorosoro iri vanoti Amai Elizabeth Gwaunza, VaChinembiri Bhunu naVaBharat Patel vakatambira kubviswa kwekupikiswa kwemutongo uku, kana kuti “withdrawal of appeal” mushure mekunge vanzwa kubva kumagweta ainge akamirira VaKasukuwere namagweta ange akamirira makanzura aya.
Amai Gwaunza vakaudza dare kuti vainge vatambira kubviswa kwekupikisa mutongo uku sezvo ivo nevamwe vavo vakaona pasina chiri pamutemo chingatadzise kubviswa kwekupikisa mutongo uku.
Muna Kukadzi wegore rino dare reHigh Court raive rapa mutongo wekuti kumbomiswa basa kwaive kwaitwa makanzura eguta reGweru naVaKasukuwere kwaive kusiri pamutemo sezvo bumbiro remutemo risingapi gurukota rezvematunhu masimba ekuita izvi.
Muna Nyamavhuvhu wegore rapera VaKasukuwere vainge vamisa basa makanzura ose gumi nemasere kusanganisira meya VaHamutendi Kombayi vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe nehuwori.
VaKombayi nemamwe makanzura gumi vaive vakwira kudare vachipikisa kumiswa basa kwavo uku, asi kusvika pari zvino komiti yevanhu vatatu inotungamirwa naVaTsunga Mhangami ndiyo iri kufambisa mabasa ekanzuru muguta reGweru. Komiti iyi yakadomwa naVaKasukuwere.
Magweta aVaKasukuwere vachitungamirwa naVaEphraim Mukucha wekuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende vange vakumbira kuti dare reSupreme Court ritambire kuti kunyange hazvo VaKasukuwere vaive vaita zvisiri pamutemo vaive vaita izvi senzira yekudzivirira kutadza basa kwavati kwaiitwa nemakanzura eGweru.
Asi vatongi vakati hazvaigona kuti vatambire chikumbiro ichi sezvo zviri pachena kuti VaKasukuwere vaive vaita zvisiri pamutemo.
Mushure mekubvunzurudzwa kwekanguva, VaMukucha vazoti vawona zvakakodzera kuti vabvise kupikisa kwavo mutongo wakaitwa nedare reHigh Court, dare reSupreme Court rakabva ratambira izvi asi rati VaKasukuwere vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi.
Magweta emakanzura eguta reGweru VaReginald Chidawanyika, VaEsau Mandipa naVaLeopold Mudisi vakatambira zvakaturwa nedare izvi.
Asi VaChidawanyika vaudza Studio 7 kuti pane kuti ritambire zvaitwa nemagweta aVaKasukuwere zvekubvisa kupikisa mutongo weHigh Court, shuviro yavo yange iri yekuti dai dare reSupreme Court rarasa zvachose kupikiswa kwemutongo uku.
VaCharles Chikozho vanove mumwe wemakanzura eGweru variwo mutevedzeri wameya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pange pave nenguva yakareba nyaya iyi isati yapetwa vafara kuti vave kukwanisa kudzokera kunoita basa ravakasarudzirwa nevagari.
Vati havatarisire kuti VaKasukuwere vachadazve kuvatsvagira imwe mhosva.
Bato rinopikisa reMDC-T rinogara richichema chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuru emumaguta nemadhorobha.
Asi VaKasukuwere vanoti vanopindira kana pachiitwa zvehuwori. Asi vamwe vanoti hofisi yavo ndiyo inotopesvedzera zvehuwori mumakanzuru.